Adihevitra notontosaina tao amin’ny pejy Facebook-n’i Transparency International Initiative Madagascar : Ny fandraisan’ireo mpiasam-panjakana fanomezana : azo leferina ve izany eto Madagasikara ? - Transparency International - Initiative Madagascar
Adihevitra notontosaina tao amin’ny pejy Facebook-n’i Transparency International Initiative Madagascar : Ny fandraisan’ireo mpiasam-panjakana fanomezana : azo leferina ve izany eto Madagasikara ?
Nivoaka ny 12 Aogositra 2016 ao amin'ny Hetsika,
Efa lasa toy ny fitsipika ho an’ireo olom-pirenena ny manolotra fanomezana ireo mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Any amin’ny firenena hafa sasany dia misy fifehezana manokana mihitsy izany mba tsy hivaona amin’ny lalamahitsy. Efa misy fetra hapetrak’izy ireo amin’ny vidin’ny fanomezana azon’ny mpiasam-panjakana raisina. Fa eto Madagasikara kosa dia tsy mbola misy fitsipika mipetraka toy izany. Izany no nahatonga an’i Transparency International Initiative Madagascar hanatenteraka adihevitra ny alarobia 10 aogositra 2016 tamin’ny alalan’ny tambazotran-tserasera Facebook mba hahafantarana ny hevitry ny olona mahakasika ny lohahevitra hoe « Fandraisan’ireo mpiasam-panjakana fanomezana : azo leferina ve eto Madagasikara ? ».
Samy naneho ny hevitr’izy ireo ny mpandray anjara mahakasika ny famaritan’izy ireo ny atao hoe kolikoly raha ny resaka fanomezana atolotra ireo mpiasam-panjakana no asian-teny, ny antony mahatonga ny olona hanao izany, ny fiantraikany ary ny vahaolana naroson’izy ireo.
Amin’ny ankapobeny, araky ny hevitr’ireo izay nandray anjara, azo sokajiana ho kolikoly ny fandraisan’ireo mpiasam-panjakana fanomezana rehefa tsy ao anatin’ireo fifehezana ny asa hapetrakin’ny toeram-piasany, na koa ny fiandrasan’ireo olon-tsotra tambiny amin’ny fanomezana izay atolony ilay mpiasam-panjakana. Na dia fanomezana madio ihany koa aza anefa no tanjon’ilay mpanolotra fa misy fiantraikany amin’ny fanapaha-kevitr’ilay mpiasam-panjakana izany dia azo sokajiana ho kolikoly.
Ny antony tena mahatonga ireo olom-pirenena hanolotra fanomezana, araky ny hevitr’izy ireo, dia mba hanafainganana ny fikarakarana ny taratasin’izy ireo izay tena maharitra nohon’ny tsy fahatomombanan’ny fitaovana am-pelatanan’ny fanjakana na ilay mpiasam-panjakana mihitsy no miandry tolotra vao manatontosa ny asany. Ankoatr’izay, tsy ampy an’ireo mpiasam-panjakàna koa hoy ireo mpanadray anjara sasany nandritry ny adihevitra, ny karamany ka any amin’ny kolikoly izy ireo no mameno ny banga.
Vokany dia zary zatra tolorana ilay mpiasam-panjakana etsy andaniny ary ilay olon-tsotra koa dia nizatra hanome etsy ankilany hany ka lasa toy ny zavatra ara-dalàna izany na dia tokony ho maimaim-poana aza. Tsy manao ny asany araka ny hitsiny intsony izy raha tsy mahazo tolotra kely. Voaresaka tao ihany koa ny fisian’ny fiangarana sy fanavakavahana satria tsy maintsy izay nanome fanomezana azy no hoomen’ilay mpiasam-panjakana lanja kokoa.
Mba hiatrehana izany dia nanao tolokevitra izy ireo ny tsy tokony hanomezan’ireo olompirenena fanomezana ireo mpiasam-panjakana mba tsy hanazarana azy ireo. Tokony hisy fitsipika hipetraka hifehezana ny fanolorana fanomezana mandritry ny andro fety ihany koa araky ny vahaolana naroson’ireo mpandray anjara. Ohatra rehefa vanim-potoanan’ny fety dia azo atao ny manolotra fanomezana azy ireo. Zavadehibe ihany koa ny fahasahian’ireo olom-pirenena mandà ny handoa mihoatra nohon’ny tokony ho izy. Ireo mpitondra firenena, mpitondra fivavahana, ray aman-dreny ary ireo mpampianatra dia tokony ho fitaratra amin’ny tsy fandraisana sy ny tsy fanomezana kolikoly. Farany, nohazavaina ihany koa fa tokony ho laharam-pahamehana ny fiezahana hampandroso ny firenena ary izany dia mba hampitombo ihany koa ny karaman’ny mpiasam-panjakana mba tsy hanintona azy ireo hanaiky na hanao kolikoly.
Manome fotoana anareo indray izahay amin’ny adihevitra manaraka karakarainay amin’ny 23 aogositra 2016 manomboka amin’ny 12 ora sasany ka hatramin’ny 1 ora sy sasany ao amin’ny pejy facebook Transparency International Initiative Madagascar.